ဖိအားကိုထိန်းညှိ, ဓာတ်ငွေ့ထူးထူးအပြားပြား, ပိုက် fittings - Wofly
dual- အဆင့်ဖိအား Regulator
Caps & Plug များ
အလယ်အလတ်ဓာတ်ငွေ့ panel ကို
လူပျိုဆလင်ဒါဓာတ်ငွေ့ Panel ကို
နှစ်ဆဓာတ်ငွေ့ panel ကို
2W Solenoid အဆို့ရှင်
2T LPG solenoid အဆို့ရှင်
2L ရေနွေးငွေ့ Solenoid Valve
ဆည်မြောင်း Solenoid Valve
R11 လူပျိုအဆင့်ဖိအား Regulator
R11 စီးရီးသံမဏိဖိအားထိန်းညှိသည် Single- stage မြှေး, လေဟာနယ်ဖွဲ့စည်းပုံ stainless diaphragm output ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပစ္စတင်ဖိအားကိုလျှော့ချသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အမြဲတမ်းထွက်ပေါက်ဖိအား၊ အဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောသွင်းအားစုဖိအားအတွက်အသုံးပြုသည်၊ သန့်စင်သောဓာတ်ငွေ့၊ စံဓာတ်ငွေ့၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျယ်ပြန့်သောအတွေ့အကြုံရှိသောမြင့်မားသောဖိအားကိုထိန်းညှိသူများ၏ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစံနှင့် bespoke ယူနစ်အတွက်
HIgh ဖိအား 4000psi အောက်ဆီဂျင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီးဆင်းမှုစံချိန်စံညွှန်း
–Chrome-plated ကြေးဝါ ...
Argon Co2 နိုက်ထရိုဂျင် 200bar ကြေးဝါဖိအားစနစ်အောက် ...
ကာဗွန်၊ အာဂွန်၊ နိုက်ထရိုဂျင် Pressu ...
250 psi ပစ္စတင်သောကြေးဝါ High Flow Nitrogen Pressur ...
နံရံပေါ်တပ်ဆင်ထားသည့်လိုင်းတစ်ခုတည်းအဆင့် 3000psi Nitroge ...
ကုန်ပစ္စည်း Parameenters: M ...
၁ / ၂ လက်မချိန်ညှိနိုင်သောဟီလီယမ်တစ်ခုတည်းအဆင့်အမြင့် ...
အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: ၁ ။
250psi 3/4″ NPT အလတ်စားစီးဆင်းမှုမြှေးအက်စ် ...
ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်: 1. တစ် ဦး တည်း - ...
နိုက်ထရိုဂျင် Co2 သံမဏိတူရိယာဓာတ်ငွေ့အကြို ...
316 သံမဏိဆလင်ဒါ dual- အဆင့်ဖိအား ...
အသွင်အပြင်: 1. ဖိအား Regulat ...
အနိမ့်ဖိအား 500psi က Secondary Terminal ကိုဓာတ်ငွေ့ panel ကို
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: တပ်ဆင်ထားသော R1 ...
မြင့်မားသောဖိအား 3000 psi switchover ထူးခြားသောဓာတ်ငွေ့ ...
WL300 200bar Semi-automatic Changeover Gas Mani ...
သံမဏိ 316 တစ်ခုတည်းဆလင်ဒါဓာတ်ငွေ့ panel က M ...
Wofly ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များအားဓာတ်ငွေ့ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်နာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။
Wofly အားထိန်းညှိခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့ထုထည်၊ ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဘောလုံးအဆို့ရှင်များ၊ အပ်အဆို့ရှင်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တိကျမှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ငွေ့ဖိအားကို Regulator ၏ခွဲခြားခြင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
မတ်လ / 04/2021
လုပ်ဆောင်ချက်များကို၎င်းကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် - အလယ်ဗဟိုနှင့်အမျိုးအစားကိုမတူကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် - တစ်ခုတည်းနှင့်နှစ်ဆင့်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခြားနားချက်က ...
ဓာတ်ငွေ့ဖိအားကို Regulator များအတွက်ဆူညံသံ၏အကြောင်းရင်းများ
၁။ စက်မှုတုန်ခါမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဆူညံသံ။ ။ ဓါတ်ငွေ့ဖိအားလျှော့ချသောအဆို့ရှင်၏အစိတ်အပိုင်းများသည်အရည်စီးဆင်းသောအခါစက်မှုတုန်ခါမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စက်မှုတုန်ခါမှုကိုပုံစံနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် - ၁) ကြိမ်နှုန်းနိမ့်သောတုန်ခါမှု။ Vibra ဒီလိုမျိုး ...
ဖိအားကို Regulator ၏ယိုစိမ့်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
အဆိုပါဖိအားထိန်းညှိသည်မြင့်မားသောဖိအားဓာတ်ငွေ့ကိုနိမ့်ဖိအားဓာတ်ငွေ့အဖြစ်လျှော့ချခြင်းနှင့်ဖိအားနှင့်စီးဆင်းမှုကိုတည်ငြိမ်စေသောထိန်းညှိပေးသည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လောင်သောကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစနစ်၏လိုအပ်သောနှင့်ဘုံအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကြောင့် ...
မည်သည့်အဆို့ရှင်သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ဖြေရှင်းချက်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသေချာမသိပါ။ သင့်အားလမ်းပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုသုံးပါ ...
မည်သည့်အဆို့ရှင်သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့ဖြေရှင်းမှုကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဖုန်းခေါ်ပါ (သို့) အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အချိန်ကိုသက်သာစေနိုင်ပြီးသင့်ကုမ္ပဏီအတွက်အမှန်တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လိမ့်မည်။